४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्रि भयो योे कचौरा !! - IAUA
४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्रि भयो योे कचौरा !!
ramkrishna October 8, 2017	४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्रि भयो योे कचौरा !!
बीबीसी । हंङकङमा हालै एउटा कचौरा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँमा लिलाम भएको छ ।चिनियाँ माटोबाट बनेको उक्त कचौरा एकहजार वर्ष पुरानो हो । चीनको सांग राजवंशका पालको यो कचौरा मंगलबार हंगकंगमा कीर्तिमानी मूल्यमा बिक्री भयो ।
खरिदकर्ताले यसलाई झण्डै ३ अर्ब ८० करोड डलर मूल्य तिरेर किनेका छन् । खरिदकर्ताले आफ्नो परिचय गोप्य राखेका छन् ।सोथबे अक्सन हाउसका अनुसार, लिलाममा राखेको २० मिनेटमै उक्त दुर्लभ कचौरा बिक्री भएको हो । कतिपयले फोनमै बोली लगाएका थिए भने कतिपय बोली लगाउनेहरु लिलाम कक्षमा पनि आएका थिए । सबैभन्दा बढी बोली लगाएर कचौरा खरिद गर्नेले चाहिँ फोनबाटै बोली लगाएका थिए ।
यो कचौरा १३ सेन्टिमिटरको छ र निलो–हरियो रंगको छ । यो कचौराका लागि सुरुवाती बोली नै १ करोड २ लाख डलर लागेको थियो ।
Previous Previous post: टाइटानिक बारेका १२ तथ्य, सायद तपाईंलाई थाहा छैन
Next Next post: यस्ता ५ गुण भएका युवकसँग मोहित हुन्छन् युवतीहरु